‘उहिले बाजेका पालामा’
शङ्करनाथ रिमालले के साेचेर बनाएका थिए अरु देशकाेभन्दा फरक र माैलिक झण्डा ?
नेपाल भित्रियो ‘रिभेन्ज पोर्न’, इन्टरनेटमा भेटिए थुप्रै अश्लील समूह
वन मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन निकाय नेतृत्वविहिन, मन्त्रीको स्वार्थले धरासायी बन्दै एनटीएनसी
नेकपा विवादको छायाँमा पर्‍याे नयाँ आईजीपी नियुक्ति
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सोमबार पुन: बस्ने
जबर्जस्ती करणीको आरोपमा २ जना पक्राउ
नेकपाको विवाद नजिकबाट नियालेका छौं, भूमिका खोज्न संस्कारले दिंदैन: नेपाली कांग्रेस
ब्लग सोमबार, भदौ २, २०७६
उहिलेका तीता, मीठा र अनौठा प्रसङ्ग खोतल्ने रेडियो कुराकानीले त्यो बेलाको सामाजिक व्यवहार, अर्थतन्त्र र विचित्रका चालचलन श्रोतासामु ल्याएको थियो।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले रेडियो सगरमाथाको प्रसारण शुरू गरेपछि के–कस्ता कार्यक्रम प्रसारण गर्ने भनेर विचार–विमर्श चल्यो । २०५५ सालताका म नेफेज मै काम गर्थें । ललितपुरको बखुण्डोलस्थित रेडियो सगरमाथाको कार्यालयमा एक दिन कनकमणि दीक्षित, विनोद भट्टराई, रघु मैनाली लगायतका बीचमा त्यस्तै विमर्श चल्यो ।
एउटा नयाँ कार्यक्रम चलाउने, जसबाट पाको पुस्ताको सम्मान होस् र उनीहरूका अनुभव पछिल्लो पुस्ताको लागि शिक्षाप्रद पनि होउन् भन्ने कुरा भयो । कार्यक्रमबाट ऐतिहासिक घटना–सन्दर्भको अभिलेख रहोस् भन्ने उद्देश्य पनि थियो ।
कुरैकुरामा यो काम मेरै काँधमा आयो । रेडियो सम्बन्धी रत्तिभर अनुभव छैन, कसरी चलाउने कार्यक्रम ! त्यसवेला ७० वर्षमा हिंडिरहेको थिएँ । अघिल्लो पुस्ताको मन–पेट छामेर तिनकै शैलीमा गफगाफ गर्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवारी नस्वीकारी धरै पाइएन । कार्यक्रमको नाम राख्न घोटिएँ । अन्ततः कसले हो भन्यो– ‘उहिले बाजेका पालामा’ । आधा घण्टाको कार्यक्रम साप्ताहिक रूपमा प्रसारण गर्ने सल्लाह भयो ।
कुनै तालिम नै नलिएको मान्छेले रेडियो कार्यक्रम चलाउनु कम्ता चुनौती थिएन । धेरै साथीसँग सल्लाह मागें । पहिलो अतिथि बने, ९१ वर्षका सिद्धिगोपाल वैद्य । २९ भदौ २०५५ बाट कार्यक्रम प्रसारण हुन थाल्यो ।
पसिना छुटाउँदै कार्यक्रम
डर अन्त कतै हुँदैन, मान्छेको मनमै हुन्छ । त्यो पहिलो कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै गर्दा स्टुडियोमा मेरो पसिना नै छुट्यो । बोली अकमकियो । त्यो क्रम त्यसपछिका अरू केही भागमा पनि दोहोरियो । विस्तारै आँट आयो ।
दक्षिणएशियाको पहिलो सामुदायिक रेडियो हो, रेडियो सगरमाथा । रेडियो प्रसारणका लागि अनुमतिपत्र लिनका लागि गरिएको कसरतको कथा छुट्टै छ । नेफेज ले लाइसेन्सका लागि दौडधुप गर्ने जिम्मा मलाई दिएको थियो । लाइसेन्स पाउनु अघि केही समय काठमाडौंको कालधारामा परीक्षण प्रसारणपछि रेडियोलाई ललितपुरको बखुण्डोलमा सारियो ।
गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सञ्चारमन्त्री थिए, चिरञ्जीवी वाग्ले । उनले लाइसेन्स दिंदै दिएनन् । पछि राधाकृष्ण मैनाली सञ्चारमन्त्री भए । २०५६ जेठमा लाइसेन्स पाइयो । रेडियो नेपालको एकछत्र राजमा सामुदायिक प्रयासबाट अर्को रेडियो सञ्चालन हुनु परिवर्तनको फड्को नै थियो ।
‘लभ गरियो कि गरिएन ?’
मेरो कार्यक्रममा समाजका गन्यमान्यदेखि सामान्य जनसम्म अतिथि बन्थे । शुरूमा आफूभन्दा उमेरमा पाकालाई मात्र अतिथि निम्त्याउँथें ।
पछि भने छुट्टै मापदण्ड बनाएँ, अनुभव र योग्यतामा आफू भन्दा जेठा–जेठीलाई अतिथि बनाउने । जस्तै, मभन्दा कान्छा, राजा महेन्द्रका प्रमुख निजी सचिव लोकदर्शन बज्राचार्यसँग आठ भाग लामो कुराकानी गरेको थिएँ । त्यसैका आधारमा उनले २०६६ सालमा ‘उहिले बाजेको पालामा’ शीर्षकमै किताब निकाले ।
लगातार १७ वर्षसम्म ‘उहिले बाजेका पालामा’ सञ्चालन गर्दा झ्ण्डै ७०० जनासँग अन्तर्वार्ता गरिएछ । कुनै साता पात्र नभेट्दा कति जनाको वार्तालाप दोहो-याएर प्रसारण गरियो ।
अतिथि बनेका व्यक्ति वितेपछि श्रद्धाञ्जलीस्वरूप पनि कुराकानीको रेकर्ड बजाइन्थ्यो । धेरै पात्रहरूसँग कुराकानी गरेपछि मेरो अनुभव कस्तो भयो भने, प्रायः मानिसलाई मेरो जिन्दगीमा के भएको छ र ? मसँग के छ र ? भन्ने हीनताबोध हुँदो रहेछ । तर कोट्याउन सक्दा तिनै व्यक्तिसँग आफ्नो समयको धेरै सामग्री खाँदिएर बसेका हुँदा रहेछन् ।
अतिथिहरूसँग ठट्टा र रमाइलो पनि हुन्थ्यो । उमेरमा लभ गरियो कि गरिएन भनेर सोध्थें । कोही लाजले गुजुल्टो पर्थे, कतिपय भने खुलेर अनुभव सुनाउँथे । घाँसे वा असारे गीत गाइयो कि गाइएन भनेर सोध्दा कति त गुनगुनाउन कस्सिइहाल्थे । बडो रोचक र मीठो माहोल हुन्थ्यो । कार्यक्रमको अन्तिम भाग २१ असोज २०७२ मा प्रसारण भएसँगै नियमित रेडियो कर्मबाट विदा भएँ ।
जात फिर्ता पाएका वैद्य
पहिलो अतिथि सिद्धिगोपाल वैद्यका पुर्खाले राजपरिवार र श्री ३ का परिवारको उपचार गरेका रहेछन् । उनले बताए अनुसार राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहका छोरालाई बिफरले सताएछ । उनका पूर्वजले अनेक उपचार गर्दा पनि बचाउन सकेनछन् । प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा र वैद्यमाथि षड्यन्त्र गरेर मारेको अभियोग लागेछ । ती वैद्य र तिनका खलकलाई नै काटिएछ ।
त्यो परिवारका पाँच वर्षका एक बालकलाई चाण्डाल बनाउन पोडेको जिम्मा लगाइएछ । ती बालक भाजुमान वैद्य भएछन्, तर उनी थिए चाण्डाल अर्थात् निकृष्ट मानिने जात ।
त्यसै ताका जङ्गबहादुर राणाकी बिरामी आमालाई भाजुमानले निको पारेछन् । उनलाई चाहिएको कुरा माग्न भनियो । एक कप्तानले सिकाए अनुसार भाजुमानले भनेछन्, ‘म वैद्य भए पनि पोडे भएर बस्नुपरेको छ । हामी पोडे होइन, श्रेष्ठ जातका हौं । जात फिर्ता पाउनुप¥यो सरकार !’ त्यसपछि उनको जात फिर्ता भएछ ।
यो कुरा नेपालको इतिहासमा शायद कतै उल्लेख छैन । ‘उहिले बाजेका पालामा’ कार्यक्रमले इतिहासको खोजीको लागि यस्ता थुप्रै सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।
सोमबार, असार २२, २०७७ के महामारीकै बीच होला त रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा ?
सोमबार, असार २२, २०७७ शङ्करनाथ रिमालले के साेचेर बनाएका थिए अरु देशकाेभन्दा फरक र माैलिक झण्डा ?
आइतबार, असार २१, २०७७ नेपाल भित्रियो ‘रिभेन्ज पोर्न’, इन्टरनेटमा भेटिए थुप्रै अश्लील समूह
आइतबार, असार २१, २०७७ वन मन्त्रालय अन्तर्गतका तीन निकाय नेतृत्वविहिन, मन्त्रीको स्वार्थले धरासायी बन्दै एनटीएनसी
रिपोर्ट सरकार सुन्दैन सांसदका प्रश्न र समितिहरूका निर्देशन
‘नेकपा फुट्यो भने नेपालमा कम्युनिष्ट सिद्धिन्छ’ सइन्द्र राई
महामारीमा नबिर्सौं यी सम्भावित मानवीय संकट हिमालखबर
मंगलबार, असार १६, २०७७ कथा घेराको सडक नाटक ‘हाच्छिउँ साच्छिउँ’